Maminavina Indray An’i Pokémon Go Ho Mpilalao Sarimiaina Sovietika Ireo Mpanakanto Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2016 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, русский, Ελληνικά, Italiano, bahasa Indonesia, English
Malaza be eran-tany ilay kilalao Pokemon Go ary efa niroboka sahady tao amin'ilay fialamboly ireo mpisera Rosiana na dia vao ny 18 Jolay aza izy no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Rosia . Efa nampitandrina sahady ireo manam-pahefana Rosiana fa afaka ampiasaina ” hambolena korontana “ny kilalao ary mety ‘ hanimba antsika [Rosiana] ara-panahy. “
Naka tamin'ny fomba malefaka kokoa ny fanaovana ny Pokémon Go ireo mpisera RuNet hafa. Lasa saina ireo vondrona mpanakanto sady mpamorona Rosiana avy ao amin'ny fiarahamonina 2D Among Us ao amin'ny VKontakte izay tambajotra sosialy lehibe indrindra ao Rosia : Ahoana raha nitoetra tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ny toeran'ilay kilalao ary fenoina sarimiaina Sovietika taloha? Vita tsara mahafatifaty ny vokatry ny fikirakirana ny sary, nitondra an'i Cheburashka sy ireo sarin'ny sarimiaina malaza hafa tao anaty finday ary nametrahana gidro, boloky ary Kuzya avelo mpitabataba fetsifetsy fantatra any amin'ny endri-toerana mora ahafantarana an'i ny taorian'i Sovietika, toy ny garazy efa simba, toerana filalaovana sy sehatra indostria haolo.
Nampiasa singa hafa tamin'ny lalao ihany koa ireo mpanakanto, tamin'ny fanoloana ny fitaovana pokeball ho baolina fingotra mena filalaon'ankizy. Tena hita ho efa mahazatra ireo antsipirihany rehetra hany ka nanamarika ny mpisera VKontakte iray fa tahaka ny “mandre mihitsy ny feon'ilay baolina izy”
Nizara ireo sarin'ny mpilalao an-tsarimiaina na an-tsarimihetsika novaina ho sarin’ ny zavamisy mahazatra ny fiarahamonina 2D Among Us, nanome endrika maha-te-hilalao sy matetika mahatalanjona amin'ny zavatra hitantsika isan'andro manodidina antsika. Jereo ireo mpilalao sariitatra nakana aingam-panahy avy tamin'ny Pokémon Go maro kokoa ao amin'ny pejy VKontakte 2D Among Us.